सबै चीज एक राम्रो बिर्सिएको पुरानो हो! यसको अनुसार, धेरै पुरानो घटना फिर्ती। फिलहाल, हामी टम होल्याण्ड को प्रदर्शन मा नयाँ स्पाइडर मैन को उपस्थिति र पुनरुत्थान "आमा" को रूप मा प्रसन्न हुन्छ। जस्तै बिर्सिएका र बिर्सिएका खेलहरू चिन्ह लगाइएका छन्। यो शब्द के हो? हामी यस लेखमा विवरणको जवाफ दिनेछौं!
रिमाइन्डर्ड - यसको के मतलब छ?
Remastering (reissue) - पुरानो संगीत ट्रयाकहरू, चलचित्रहरू र खेलहरूको नयाँ संस्करणहरूको रिलीज। बहुमतको रायमा, यो सधैँ एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। निस्सन्देह, जो पुरानो खेलको पुनरुत्थान विरुद्ध हुनेछ? कल्पना गर्नुहोस् कि कन्सोल प्लेटफार्म "सेगा" मा तपाईंको मनपर्ने खेल पुन: डिजाइन गरिनेछ र अपरेटिङ सिस्टम "विन्डोज" मा रिलीज गरिनेछ। "उत्कृष्ट," - तपाई भन्नुहुनेछ। तर यस्ता घटनाहरू अवस्थित छन्, किनकि खेलहरू रिफस्टर गरिएको खेल प्रायः कम्प्यूटरमा आउँछ, जसको आधारमा "सेगा" र "डण्डी" कन्सोलहरू छन्। एक उदाहरणको रूपमा, तपाईं डेभीड बोवीको "ट्रयाक म्यान" ट्रयाक ल्याउन सक्नुहुन्छ, जुन फिल्म "द मार्टियन" को लागि रिफर्म गरिएको थियो।
निस्सन्देह, यो घटनामा यसको फाइदा र हानि छ। आउनुहोस् तिनीहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्!
с английского языка - это "переиздание". अंग्रेजी बाट अनुवादित अनुवाद एक "पुन:" हो। यो मुख्य लाभ हो - एक खेल वा एक संगीत ट्रयाकले नयाँ जीवन पाउँछ। यसको अतिरिक्त, यो युवा मान्छे अतीतको भाग संग परिचित हुन अनुमति दिन्छ। डेभिड बाउबो सुन्नको लागि किशोरहरू अझ बढी इच्छुक हुनेछन् यदि संगीत ट्र्याकको आवाज सम्पादन गरिन्छ।
दोस्रो फाइदा उत्पादनको बढि गुणस्तर हो। सुधारिएको आवाज संग संगीत सुन्नुहोस् वा अधिकतम ग्राफिक्सको संग कम्प्युटर खेलको मजा राम्रो छ, के हो? यो दु: खी छ, तर त्यहाँ "शान्कङ ब्लू" को रिमास्टरिङ संस्करणहरू छैनन्।
हानि गुणहरू भन्दा धेरै सानो छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नोकसान मौलिकताको हानि हो। यदि साँचो समूह "सिभिल डिभाइस" को गीतहरू रिमाइस्टिङको अधीनमा छन् भने साँचो पङ्क्तिहरू र रकर्सहरू तुच्छ हुनेछन्। रेट्रो गेम्सका प्रशंसकहरू बीचको यस्तै प्रतिक्रिया, जब "परियोजनाको फेर", "Segu" मा जारी गरिएको परियोजनाले कम्प्यूटरमा पुनः दियो। दुर्भाग्यवश, यो खेलको मौलिकतालाई मारियो, यो राम्रो सेट एक सेट-टप बक्समा लिन्छ। सबै पछि, कुनै पनि मामला मा gamers "क्रोध को सडक" को श्रेणी को "रिमाइन्डर्ड-खेलहरु" मा हुनु हुँदैन।
अधिक "द ब्ल्याक ड्यूटी"
खेलको यस श्रेणीको लागि सबैभन्दा साधारण उदाहरण कल ड्यूटी रिमास्टर गरिएको छ। खेल "रवेन सफ्टवे" कम्पनी द्वारा पुनःिसित गरिएको थियो। सबै मनपर्ने "चुन्च" मा ग्राफिक्सहरू सही थियो, केही बनावटहरू, ध्वनि र प्रकाश सुधार। नयाँ सुविधाहरू थपियो: सुधारिएको इनाम प्रणाली, हतियार र गोला बारूदको वृद्धि बढ्यो। खेलको नयाँ संस्करण पुरानो जस्तै, एक क्यान्डी जस्तै चमकदार आवरणमा, किनकि यो खेलना राम्रो छ।
हालैमा, कम्पनी "अक्टिविज्ज" ले नयाँ "कल अफ ड्यूटी" को रिलीज गरे। साथै, "कल अफ ड्यूटी: रिमाइस्टर्ड आधुनिक वारफेयर" को पुरानो भागलाई घोषणा गरिएको थियो। विकासकर्ताले दाबी गर्दछन् कि ग्राफिक्स उच्च गुणस्तरमा, साथसाथै ध्वनि हुनेछ। ग्राफिक अधिक विस्तृत हुनेछ, र multiplayer मोड मा सबै भन्दा लोकप्रिय नक्शा अघिल्लो संस्करणहरु भन्दा धेरै स्टीपर हुनेछ। प्रशंसकहरू र नयाँ रूसी आवाज रमाइलो हुनेछ। "Aktivizhen" को मान्छे प्रतिज्ञा गरे कि "लोमोमोटिव एक बूम" को रूप मा प्रयोग गरेन को रूप मा यस्तो टिप्पणिहरु । "एविभेजन" बाट घोषणाको लागि धन्यवाद, प्रशंसकहरूले "आधुनिक युद्ध" मा राम्ररी सम्झौता गरिएका अर्थहरू महसुस गरे। हामी आशा गर्छौं कि परिवर्तित गरिएको खेल खेल्दा मूलको रूपमा सुन्दर हुनेछ।
दुर्भाग्यवश, "आधुनिक युद्ध" को पुनः संस्करण मा खेल्न को लागी, तपाईंलाई श्रृंखला को एक नयाँ भाग खरीदना हुनेछ - "असीमित गेम"। साजिशको अनुसार, नायकले सौर प्रणालीको ग्रहहरूमा अपरेसनहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। विकासकर्ताहरूको अनुसार, खेल यथार्थवादी हुनेछ, कुनै पनि extraterrestrial दौड थपिनेछ। तर हामी एक रोमाञ्चक फिर्ता कहानीको आशा गर्दैछौं, जो रक्षात्मक फ्रान्सको रक्षा र संयुक्त राष्ट्र अन्तरिक्ष गठबन्धनका बीच टकरावको बारे बताउँछ।
परिचय र नवीनता। अब प्लेयरले असामान्य तरिकामा चल्न सक्छ, फ्लिपहरू प्रदर्शन गर्न, उच्च जम्पहरू, हावा र अन्य चालहरूमा ओभरटर्न सक्छ। याद गर्नुहोस् कि "कालो ओप्स 3" को अघिल्लो भागमा नायकले पनि पार्कोरको शैलीमा स्टन्ट प्रदर्शन गर्ने र पर्खालहरू वरिपरि घुमाउन सक्ने क्षमता थियो। चूंकि कार्यहरू ग्रहणमा राख्छ, स्पेसकफ्ट र जेट प्याकहरू खेलमा आशा गरिन्छ।
अहिले मध्य युगको बारेमा
धेरैलाई थाहा छ कि केही ठाउँमा "Skyrim" ग्राफिक्सहरू काम गर्दैनन्। यदि व्यक्तिगत कम्प्युटरहरूमा यो समस्याले मात्र सबै सम्भावित प्याचहरू प्रयोग गरेर हल गर्न सकिन्छ, त्यसपछि कन्सोल प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो समाधान योग्य छैन। अझ हालै, E3 प्रदर्शनीको समयमा "स्किमिम" को विकासकर्ताले खेलको संशोधन संस्करण "प्लेस्टेशन" र "एक्स-बक्स" को लागि घोषणा गरे। अब कन्सोलिन्कीले फैशन स्थापना गर्न सक्छ।
चौथो "पतन आउट", 2015 मा रिलीज गरिएको छ, खेलाडीले विभिन्न परिमार्जनहरू जस्तै। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूसँग खेल्न रमाइलो र रमाइलो छ।
स्किमिम रिमास्टरले हामीलाई सुधारिएको प्रकाश, तेजता, प्रतिबिम्बको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ। प्राकृतिक आहारको अनुकरण खेलको अघिल्लो संस्करणहरूमा भन्दा राम्रो देखिन्छ। उनीहरूको लागि धन्यवाद, खेलको अवस्था अधिक यथार्थवादी बन्यो। साथै, वनस्पति तालिका समायोजन र जीवंत देखिन्छ।
केवल एक चीज जो परिवर्तन गरिएको छैन वास्तविक कहानी र घटनाहरु को उत्तेजित मोडिस्ट र मुर्ख हो। यो यी गुणहरूका लागि छ कि संसारभरका खेलाडीहरूले यो खेल मन पराउँछन्।
अब तपाईलाई राम्ररी राम्ररी थाहा छ। यहाँ को बारे केहि जानकारी को लागी केहि महत्वपूर्ण बुँदाहरू छन्:
रिमाइन्डर खेलको पुनः संस्करण हो, जुन ग्राफिक्स, संगीत र भ्वाईस सुधार गर्दछ।
с английского языка на русский - "обновление". अङ्ग्रेजी र रूसीबाट अनुवाद पुनःस्थापित - "अद्यावधिक"।
रिमाइस्टरिंग संगीत र खेल उद्योगमा प्रयोग गरिएको छ। यो विधिलाई उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न अनुमति दिन्छ।
तर त्यहाँ एक सानो दोष छ। कहिलेकाँही रिचार्ड गरिएको गेमहरूमा कुनै मौलिकता छैन। उदाहरणको रूपमा, तपाईं जापानी उपसर्ग "सेगा" मा खेलहरू "स्ट्रीट्स अफ फ्यार" र "सोनिक" जस्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले यस्तो कम्प्युटर गेमलाई "कल अफ ड्यूटी" र "स्किमिम" भनेर भेट्नुभयो। निस्सन्देह, रिमाइस्टिङले उनीहरूलाई नराम्रो बनाएन, तर तिनीहरूको ग्राफिक घटक सुधारियो।
खेलहरू र सङ्गीतलाई रमाइलो गर्न रमाइलो गर्न हामीलाई मद्दत गर्दछ। रिमाइस्टरले यो बहिष्करणलाई अतिमूल्य गर्न अनुमति दिन्छ। तर खेल उद्योगको किंवदंतियों को बारे मा न भूलें, किनकि उनि gameplay को अविश्वसनीय माहौल र कुनै कम महाकाव्य कहानी छैन। खेल खेल्न र कौशल सुधार गर्नुहोस्! पढ्नको लागि धन्यवाद!
ठुलो आवेदक - र दोपहर का भोजन (रातको खाना) र बुफेको तालिकाको लागि!
Tver क्षेत्रको ठूलो झिके: वर्णन, स्थानहरू र रोचक तथ्यहरू
साइकल ब्याकप्याक: कसरी छनौट गर्ने हो? लक्षणहरू
स्वस्थ जीवन शैली संग पुरानो gastroduodenitis शायद escalates